Waa Kuma Madaxweynaha Cusub Ee Dawlad Deegaanka Somalida Itoobiya”Akhriso Taariikhdiisa | Berberatoday.com
Waa Kuma Madaxweynaha Cusub Ee Dawlad Deegaanka Somalida Itoobiya”Akhriso Taariikhdiisa
Jigjiga(Berberatoday.com)-Mustafa Muhummed Omer waxa uu kudhashay Degmada Awaare sanadku markuu ahaa 1972.
Waxa uu waxbarashadiisii dugsiga hoose ee ilaa lixaad ku qaatay Magalada Awaare halka uu ku dhamaystay ilaa galaaska sideedaa magaalada dhagaxbuur.
Dugsigisii sare waxa uu ku qaatay Magaalada Herar (Med-Hani alem school), waxa uuna kamid ahaa ardaydii ku guulaysatay inay kubiiraan jacadaha dalka ethiopia, mustafe maxa uu ku qaatay waxbarashadiisii Heerka koobaad ee Degree jamacadeed Addis-Ababa University (sidhis kiiloo) isaga oo ka qaatay culuunta dhaqaalaha (Economics), waxa uuna kamid ahaa ardaydii ugu firfircoonayd xiligii jaamacada.
Waxa uu ka qaatay waxbarashadiisa heer Master Jamacad kutaala London, halkaas oo uu ka qaatay culuunta Dhaqaalaha.
Waxa uu ka shaqeeyay Deegaanka soomalida isaga oo ka soo shaqeeyay xafiisyo kala duwan waxa uuna soo maray Maareeyaha macadka Tababarka Macalimiinta, waxaa kale oo uu wasiir kuxigeen ka noqday xafiiska waxbarashada Deeganka soomalida.
Intii uu ku sugnaa deegaanka waxaa kale oo uu ka shaqeeyay haayado caalami ah sida CARE, Save The children isaga oo sanadku markuu ahaana 2006 GC ku biiray haayada qaramada midoobay laanteeda Addis isaga oo ahaa wakiilka deegaanka soomaalida ee haayada qaramada midoobay ee UN OCHA.
Sanadku markuu ahaa 2007 wuxuu uwareegay xafiisyada qaramada midoobay ee laanta zimbabwi, Kenya, United Arab Emirate iyo Somalia.
Intii uu ku sugnaa haayada caalamiga ee UN waxa uu ka qabtay xilal kala duwan ilaa uu ka gaadhay darajada international Staff.
Waxaa intaaa udheer waa qoraa ku qora luuqadaha Amharic, English iyo luuqada afkiisa hooyo, waxa uuna ahaa nin udooda xuquuqda aadanaha waxaan urajayn arimahii uu ka hadli jiray inuu fuliyo bulshadana ku dhaqo nidaam cadli ah
Alle hakugu Asturo xilka Mudane Madaxwayne Mustafa Omer
Tarikhda Madaxyanaha oo Kooban